Izao misy tranofiara vaovao ho an'ny vanim-potoana faharoa an'ny Central Park | Avy amin'ny mac aho
Ny fandaharana famoahana Apple TV + amin'ity volana Jona ity dia tena malalaka tokoa, ary rehefa hitantsika eo antenatenan'ny volana isika dia mbola misy famoahana vaovao marobe tonga amin'ny serivisy video streaming an'i Apple.
Apple TV + dia nizara tamin'ny alàlan'ny fantsona YouTube azy teaser vaovao ho an'ny vanim-potoana faharoa amin'ny programa mozika malaza Central Park, vanim-potoana faharoa izay hanomboka amin'ny 25 Jolay, ao anatin'ny 9 andro.
Central Park dia hatsikana mozika mihetsika izay, na dia mikendry ny ankizy aza, dia programa tsara ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Ny andiany dia notendrena ho loka Emmy sy loka NAACP, ka fantatrao fa misy zavatra mandeha tsara.
Ity andiana mozika natolotray an'i Emmy sy NAACP ity dia noforonina, nosoratan'i Loren Bouchard, mpandresy an'i Emmy, miaraka amin'i Josh Gad ary ilay mpandresy Emmy, Nora Smith. Anisan'ireo mpilalao mpilalao kintana i Josh Gad, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs, Emmy Raver-Lampman, Kathryn Hahn, Tituss Burgess ary Stanley Tucci.
Central Park dia mihodina manodidina ny fianakavian'i Tillerman, fianakaviana mikarakara ny Central Park, havokavoky ny tanànan'i New York. Ny fianakaviana dia misy an'i Owen (mpitantana ny valan-javaboary), mpanao gazety Paige (vadiny). I Figs Cole dia olona tia alika raha mandany ny andro fanaovana sariitatra maherifo kosa i Molly.
Ilay olon-dratsy amin'ity andiany ity dia antsoina hoe Bitsy, mpivarotra trano maniry izay maniry avadiho ny valan-javaboary malaza ao New York City amin'ny gadra hotely. Ilay namorona an'ity andiany ity, Loren Bouchard, dia mitovy amin'ny andiany Bob's Burger.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Misy tranofiara vaovao ho an'ny vanim-potoana faharoa an'ny Central Park ankehitriny